Lakkoofsi jiraattota Sioux City kan hospitaala lama keessa kan jiran yeroo dhukkuba Covid-19 kana ke | KWIT
Lakkoofsi jiraattota Sioux City kan hospitaala lama keessa kan jiran yeroo dhukkuba Covid-19 kana ke
By Fatiya Adam • Nov 30, 2020
Oromo News 11.30.2020
Oromo News 11/30/2020
Lakkoofsi jiraattota Sioux City kan hospitaala lama keessa kan jiran yeroo dhukkuba Covid-19 kana keessati baaye ul gudachu jira. Mercy-One fi Unity Point Health-St. Luke’s dhukubsattoota 102 yaalu jiran. May kara dhumaa irrati lakkoofsi baaye guddaa kan tae nama 90 ture.
Hospitaalonni biraa kan Iowa keesaa kan jiran bakkii dhukubsattaa kayaan akkuma hir’ataa deemu jiruudha, garuu ogeessi fayyaa muraasa akka jedhenati sababa ayyaana Thanks giving kanan walitti kan qabaman yoo tau dhukabaa kan dabalee akkate himan.
Iowa keessati sababa corona Virus namni du’u akkuma dabale jira, torbaan lamaan darbe kana keessati akka state tti dhumaa November dua 687 wajjiin kan suteedha.
Kunis October irraa parsanti 34% kan dabaleedha.
Iowa guyyaa wiyxata dabalataan namni due 28 akka tae gabaaste, kunis akka state guututi waligalatti nama due 2,400 kan fiduudha, namni 130 Woodbury County keessati.
Sioux land District health seati 24 keessati namni 4 dabalataan akka due gabaasan, nama tokko kan dargageessa tae dabalate.
Namni haarawa qabame 44 yoo tau akka dhukubni kun jalqabame waliigalati nmani qabame 10,000 oldha.
Dakota county keessati namni dhukkuba Kanaan qabame parsanti 22% dha. Deparmantin mana fayyaas ayyaan Thanks giving as namni 81 haarawa kan qabame yoo tau waliigalatti namni qabame 3,200 ol dha, namni due ammo 50 dha.
Gov Pete Ricketts yeroo amma Nebraska keessati sababa Corona virus namni hospitaala fayyadamu 900 gad waan tae ammas seera baase san akka hojiirra akka ta’u hime.
Seerri inni duraa haguugi fuula bakka daldalaati kan akka salons, fi tattoo parlors jiranitti walirraa fageenyi miila 6 waan jiraachu hin dandeenef.
Hospitaala ciisun xiqqaatus, garuu haali yeroo amma hospital keessa jiru akkuma yadessa taetti itti fufu jira.
Ricketts akka biyyati guuttuti seera haguugi fuula godhatan kana akka dhiifamu yaali irratti godhani turani garuu inni hin fudhanne, haguugi fuula kana irrati aari fi mormiin akka isa muudatu dandaus hime.